karatragrafika [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/2/27fd38e779f8028cb8ca3e0cd8943b65.xhtml failed
Ny memoire grafika
Ny fitohizany amin'ny reni-karatra
Ny karatra grafika no miandraikitra ny famoahana any amin’ny ecran ny sary sy soratra rehetra mivoaka avy ao anaty solosaina. Hatramin’ny nihanahan’ny sary telorirana (3D), indrindra ireo kilalao jeux-pc, dia lasa nivoatra manokana ny karatra grafika. Mila kajy mavesatra manko ireny sary ireny. Zavatra roa ary no jerena amin’ny karatra grafika:
Na koa GPU (Graphical Processor Unit). Io no tena manao ny kajy momba ny grafika rehetra. Mitovitovy amin’ny processeur ihany izy, saingy namboarina manokana hikajy sary telorirana. ATI miaraka amin’ireo Rage sy Radeon sy Nvidia miaraka amin’ireo Geforce no orinasa tena mpamokatra azy io, fa ao koa ny Intel, Sis, sns.
Mila memoire ohatra ny RAM koa ny Processeur grafika. Afaka miasa tsara kokoa izy rehefa betsaka io memoire io, fa arakaraka ny tanjany koa no hadiry ilainy. Indraindray ny RAM ihany no anombinana atokana ho an’ny kajy grafika.
Ny karatra grafika taloha dia mipetraka amin’ny PCI ohatra ny karatra rehetra. Ambany kokoa ny tosaka amin’izy ireny.
Ny ankabeazany amin’izao dia mipetraka amin’ny AGP, izay ahitana karazana hafaingany 2X, 4X, 8X. Tsy maintsy mifanaraka amin’izay hafaingana zakan’ny reni-karatra io.
Misy teknolojia vaovao atao hoe PCI-express izay tsy dia mbola ahitana betsaka, kasaina hahazoana tosaka ambony lavitra noho ny AGP.
Fametrahana karatra grafika
karatragrafika.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43